အတိုးနှုန်းများကို ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဗဟိုဘဏ်လျှော့ချ | Myanmar Business Today
We are finding ways to manage cash flow through distribution channels:…
Home Business အတိုးနှုန်းများကို ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဗဟိုဘဏ်လျှော့ချ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းများကို ယခင်ပေးနေသည့်အတိုးနှုန်းမှ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့လိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါ အတိုးနှုန်းများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေ ၁ ရက်မှစတင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာတိုးတက်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းကို တစ်နှစ်လျှင် ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘဏ်များ အပ်ငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုန်းကို လျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေစုစာရင်းအပ်ငွေ၊ ငွေစုလက်မှတ်နှင့် အချိန်စေ့မှပေးရသည့်အပ်ငွေတို့အပေါ်တွင် ပေးသည့်အနည်းဆုံးအတိုးနှုန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုးနှုန်း၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပေးရန် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံပစ္စည်းများမှာ မြေနှင့်အဆောက်အဦး၊စိန်နှင့်အဖိုး တန်ကျောက်မျက်၊ငွေစုလက်မှတ်၊ အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်၊စာရင်းသေအပ်ငွေ၊ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ပြောင်းလဲနိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ချေးငွေအာမခံဖြင့် ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများဖြစ်သည်။
Previous articleCovid-19 Fund ချေးငွေမှ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ကို ထုတ်ချေးမည်
Next articleYangon approves five investment proposals
Telenor Group has anncouned today that it has enterned into an agreement to sell 100 percent of its mobile operations in Myanmar to M1 Group for a total...
The United Nations World Food Programme said that it has successfully delivered food assistance to 334,000 most vulnerable people in Hlaing Tharyar, Yangon Region....
The military junta amended the 2020 Union Tax Law cutting the percentage of taxation on unassessed income or undisclosed sources of income with the...
Agriculture in Myanmar Struggles to Grow to its Potential
China “Slow” to Stop Illegal Log Imports from Myanmar: Minister